ကြည်စင်သန့် – အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေး | MoeMaKa Burmese News & Media
ကြည်စင်သန့် – အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေး
Exposure, Skills, and Intelligence
အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေး
ကျွန်မ အသက် ၂၈ နှစ်အထိ မြန်မာပြည်မှာ နေခဲ့ပါတယ်။ သင်္ချာနှင့်အင်္ဂလိပ်စာကို သူငယ်တန်းကတည်းက သင်ခဲ့ရပြီး အင်္ဂလိပ်လိုရေး ထားတဲ့ ပြဌာန်းစာအုပ်များကို အသုံးပြု၍ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးပညာမဟာဘွဲ့ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုတချို့ ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တော်တော်များများကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ ကျွန်မ ၂၈ နှစ် အတွင်း နိုင်ငံခြားသားတယောက်တလေနဲ့မှ အင်္ဂလိပ်လိုစကားမပြောဖူးခဲ့ပါ။ အလွန်တရာ ပြည့်စုံလှသောမိသားစုမှ မွေးဖွားခဲ့ခြင်း မဟုတ်သော၊ အလွန်တရာ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားသူတစ်ဦးလည်းမဟုတ်သော ကျွန်မကို မြန်မာပြည်၏ သာမန်လူတန်းစား (Average population) ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သူတစ်ဦးအဖြစ် ဦးစွာမှတ်ယူပြီး ကျွန်မဘဝ၏ပညာရေးနှင့်ဆက်နွယ်သော အတွေ့အကြုံအချို့ကို မျှဝေလိုပါ တယ်။ ပညာရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ ကျွန်မ ဆရာ ဆရာမတွေအကြောင်းပြောရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေရာမှာ ကျွန်မ ဆရာသမားများကို ကျေးဇူးကန်းစော်ကားလိုစိတ်များ မရှိဘဲ (တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ တိုက်ခိုက်လိုခြင်းမရှိပါ)၊ ကျွန်မ ကြီးပြင်းသင်ယူခဲ့ရတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုကြောင်းကို ဆွေးနွေးလိုရင်းက အဓိကဖြစ်ကြောင်း ဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်။
မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းမှာ သင်္ချာ၊အင်္ဂလိပ်စာ မညံ့ခဲ့သောကျွန်မ (အမှတ်၁၀၀ပေးရင် ၉၀ပတ်ဝန်းကျင်ရလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်) အထက်တန်း (၉တန်း ၁၀တန်း) အရောက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ အမှတ်တွေ နည်း, နည်းလာခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်နည်းသွားခဲ့ခြင်းဟာ စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ဘာကြောင့်လျော့နည်းခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုတော့ နောင်၁၅နှစ်ခန့်ကြာသောအခါကျမှ ကျွန်မ နားလည်စပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အလယ်တန်း အထက်တန်း သင်္ချာများကိုသင်ယူခဲ့စဉ်က အတန်းထဲတွင် ဆရာမများက သီအိုရီ နှင့်ပုံသေနည်းများကို ရှင်းပြပြီး လေ့ကျင့်ခန်းပုစ္ဆာများတွက်ခိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်ပုစ္ဆာလာရင် ဘယ်ဖော်မြူလာနဲ့တွက် အဖြေဘယ်လို ထွက်ဆိုတာကို ကျွန်မသိပြီးနောက်မှာ ဘာကြောင့် ဒီဖော်မြူလာ ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဒီသင်္ချာတွေကို သုံးမှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေက ကျွန်မခေါင်းထဲကို စီကာစဉ်ကာရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ အပေါင်း အနုတ် အမြှောက် အစား တွေကို ဈေးဝယ်ရာမှာ သုံးနိုင်တယ်၊ တြိဂံ စတုဂံတွေကို အိမ်ဆောက်ရာမှာသုံးနိုင်တယ်လို့ အကြမ်းဖျဉ်းပဲသိရာမှ အဆင့်ပိုမြင့်တဲ့ သင်္ချာတွေကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးမလဲလို့ သိချင်လာတဲ့အခါ ဆရာမတစ်ယောက်ကို မဝံ့မရဲနဲ့ သွားမေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ “သိပ်မတွေးနဲ့ ဂေါက်သွားမယ်” ဆိုတဲ့အဖြေကို ကျွန်မရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အတန်းထဲမှာ အတန်းဖော်တွေ သင်္ချာတစ်ပုဒ် အဖြေထွက်ဖို့ အပြိုင်အဆိုင်တွက်နေတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်မက တော့ ဘာကြောင့်ငါတို့ ဒါကိုလုပ်နေကြတာလဲ (why)၊ လက်တွေ့ဘဝထဲမှာ ဒါကို ဘယ်လိုသုံးမှာလဲ (application) ဆိုတာတွေကို တွေးရင်း ကျွန်မရဲ့သင်္ချာအတန်းတွေ ကုန်ဆုံးခဲ့သလို ကျွန်မရဲ့အမှတ်တွေကလည်း အောက်ဖက်ကို ထိုးဆင်းနေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူခဲ့တဲ့ နည်းလမ်း မှန် မမှန် ဆိုတာကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြင်ကို ထွက်တော့မှပဲ ကျွန်မသုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရရှိခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးက သဒ္ဒါ (grammar) ကို အထူးပြုပါတယ်။ ဝါကျတည်ဆောက်မှုကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးကုန်အောင်သင်ပေမယ့် တည်ဆောက်တတ်တဲ့ဝါကျတွေနဲ့ ကိုယ်တင်ပြပြောဆိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို သူများနားလည်အောင် ရေးသားပြောဆိုတတ်ဖို့သင်ကြားမှုအပိုင်းမှာ အတော်အားနည်းကြတယ်လို့ ကျွန်မမြင်ပါတယ်။ ၉တန်း ၁၀တန်းလောက်မှာ ဝတ္ထုရေးချင်စိတ်တွေ ပြင်းပြခဲ့တဲ့ကျွန်မဟာ အင်္ဂလိပ်စာ စာစီစာကုံးတွေကို ဘယ်အထူးထုတ်ကိုမှအားမကိုးဘဲ ကိုယ့်အတွေးတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးရေးသားဖို့ အလွန်တက်ကြွခဲ့ပါတယ်။ ဆရာမကဖတ်ရှုအမှတ်ပေးထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့အိမ်စာစာစီစာကုံးစာရွက်လေးကို ပြန်ရခဲ့တဲ့နေ့တနေ့ကို ကျွန်မ မမေ့နိုင်ခဲ့ပါ။ တတ်သမျှ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါလေးတွေနဲ့ စီကုံးထားတဲ့ ကျွန်မစာရွက်ကလေးဟာ မှင်နီတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခက်နေခဲ့ပြီး ရတဲ့အမှတ်က လည်းနည်းနည်းလေးမှ တကယ့်နည်းနည်းလေးပါ။ အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းစာရွက်က အလွန်မှသပ်ရပ်လှပပြီး သူက အမှတ်ပြည့်နီးနီးရခဲ့ ပါတယ်။ “နင်ဘယ်လိုရေးခဲ့သလဲ” လို့ သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တော့ အထူးထုတ်ထဲကစာစီစာကုံးကို မှီငြမ်းရေးသားခဲ့တယ် လို့ ရိုးသားစွာပင် သူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မှီငြမ်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သလို ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုလေးကိုလည်း သူ့လောက်နီးနီး အသိအမှတ်မပြုသင့်ပါသလားရှင်။ မှားနေတဲ့အရေးအသားတွေကို ထောက်ပြရင်း “သမီးမှာ ကိုယ်ပိုင်တွေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုရှိနေတယ် ဆက်ကြိုးစားပါ ဆရာမ အကူအညီပေးနေမယ်” လို့ ပြောတဲ့ဆရာမနဲ့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မလျှောက် လှမ်းခဲ့တဲ့ ပညာရေးခရီးဟာ အခုထက် အဆပေါင်းများစွာ ချောမွေ့ခဲ့မယ်ဆိုတာ ကျွန်မ အသေအချာပြောရဲပါတယ်။
သတ္တဗေဒအဓိကနဲ့ဘွဲ့ရထားတဲ့ဆရာမရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအတန်း၊ သမိုင်းအဓိကနဲ့ကျောင်းပြီးထားတဲ့ဆရာမရဲ့ မြန်မာစာအတန်းနှင့် အလား တူ စာသင်ခန်းများမှာ စိတ်တွေကို အစိုးမရနိုင်ခဲ့ဘဲ အတွေးများနဲ့မျောလွင့်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်မဟာ ၁၀တန်းစာမေးပွဲကို ဝိဇ္ဖာဂုဏ်ထူး သိပံ္ပဂုဏ်ထူး ၂ခုနဲ့ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် အောင်လာခဲ့ပါတယ်။ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဆေးတက္ကသိုလ်ရောက်၊ နောက်တစ်ယောက်က စက်မှုတက္ကသိုလ်ကို ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မက စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကို မရောက်ချင်ဘဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၀ တန်းအထိ အတန်းရဲ့ထိပ်ဆုံးနားမှာ အမြဲရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဆေးတက္ကသိုလ်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ထင်ကြေးရှိခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်မ မိသားစုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကျွန်မကို အထင်သေးသွားခဲ့ကြပါပြီ။ ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့်စက်မှုတက္ကသိုလ်တွေကိုမှ မရောက်ရင် ဘာမှအသုံးမ ကျတော့သလို အယူအဆရှိခဲ့တဲ့ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကျွန်မတ်ို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ ကျွန်မလမ်းပျောက်ခဲ့ပါပြီ။ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်နှင့်ဒုတိယနှစ်မှာလည်း စာသင်ချိန်တွေကို အတွေးတွေနဲ့သာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မကျေမနပ်တွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဘဝအခြေအနေကို ဂရပ်မျဉ်းနဲ့ပြနိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီအချိန်အခါကို အောက်ကိုထိုးဆင်းနေတဲ့ မျဉ်းတစ်ကြောင်းနဲ့ ဥပမာပြလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ချောက်ရဲ့အောက်ဆုံးကြမ်းပြင်ကိုထိသွားပြီးချိန်မှာ ဆက်နိမ့်ဆင်းသွားစရာဘာမှမရှိတော့တဲ့အတွက် အပေါ်ပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားရန်ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာ ကျန်တော့တဲ့အချိန်ဟာ တတိယနှစ်ကိုစတက်တဲ့နေ့ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒုတိယနှစ်အမှတ်စာရင်းအရ ခွဲခြားထားတဲ့ အထူးပြုတန်းများတက်ခွင့်စာရင်း ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဝါဏဇ္ဖဂုဏ်ထူးတန်း၊ စာရင်းအင်းဂုဏ်ထူးတန်း၊ နှင့် ဘောဂဗေဒဂုဏ်ထူးတန်း ဆိုတဲ့ အမြင့်ဆုံး၃တန်းကိုတက်ဖို့ အမှတ်မမှီခဲ့တဲ့ကျွန်မနာမည်ဟာ ဝါဏဇ္ဖရိုးရိုးတန်းတက်ခွင့်ရသူများစာရင်းမှာ ပါလာခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးသွားတက်မိတဲ့အတန်းက စာရင်းကိုင်ပညာ ဘာသာရပ်ပါ။ ကျွန်မ အပျင်းဆုံး ဘာသာရပ်ဆိုပါတော့။ ဆရာမတွက်ပြနေတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို “Debit” “Credit” လို့ တစ်တန်းလုံးက ကျောင်းသူတွေ တညီတညာတည်းအော်နေကြစဉ် သူတို့က ဒါတွေသိပြီး ငါက ဘာကြောင့်မသိရတာပါလိမ့် ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ အားငယ်စွာ အတန်းချိန်ကိုကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ (မှတ်ချက် … ကျောင်း၃နှစ်ခွဲပိတ်ချိန်အတွင်း ပြင်ပ စာရင်းကိုင်သင်တန်းများတက်ထားခဲ့ကြတာ နောက်မှသိရပါတယ်။) ထမင်းစားနားချိန် စားသောက်ဆိုင်တန်းဘက်လျှောက်လာတဲ့အခါ အနိမ့်ဆုံးအတန်းလို့ အများကဆိုတဲ့ ဘောဂဗေဒ (Economics) အတန်းကိုရောက်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်း၂ယောက်နဲ့ သွားတွေ့ပါတယ်။ ဝါဏဇ္ဖ (Commerce)နဲ့ စာရင်းအင်း (Statistics) က တခြားသူငယ်ချင်းတွေပါရောက်လာပြီး စားသောက်ဆိုင်မှာဝိုင်းဖွဲ့ကာ ကိုယ့်မေဂျာ သူ့မေဂျာအကြောင်း ပြောကြပါလေတော့တယ်။ အီကိုတန်းမှ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဦးဆောင်ပြောကြားမှုတွေက ကျွန်မရဲ့ ထုံထိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေကို လှုပ်ခါနှိုးလိုက်ပါတယ်။ “ဆရာဦးခင်မောင်ညို ပြောတာတွေ အရမ်းနားထောင်ကောင်းတယ်သိလား၊ နိုင်ငံရေး တွေလည်းပါတယ်”။ “တကယ်လား ငါလာနားထောင်ကြည့်လို့ရမလားဟင်” လို့ ကျွန်မကမေးတော့ သူ့မျက်လုံးတွေက အရောင်တောက် သွားပြီး “အိုး ကြည်စင်ရယ် ဘာလို့မရရမှာလဲ” လို့ သူက ဝမ်းသာအားရ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အီကိုတန်းမှာ တစ်တန်းသွားနား ထောင်ပြီးချိန်မှာပဲ ဘောဂဗေဒဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ထဲမှာ ကျွန်မသိချင်တာတွေ အများကြီးမှ အများကြီးရှိနေပါလားဆိုတာ အံ့သြတကြီးနဲ့ သိလိုက်ရပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ၊ အလုပ်လက်မဲ့ အခြေအနေ၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ ပြည်ပငွေပေးငွေယူရှင်းတမ်း၊ စီးပွားရေးမူဝါဒ။ အိုး … ကျွန်မဖတ်ခဲ့တဲ့ စာတွေထဲက နားမလည်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အခုနားလည်ဖို့ အခွင့်အရေးရတော့မှာပေါ့။ စိတ်တူကိုယ်တူ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူလည်း အီကို ကို အလွန်ပြောင်းချင်ကြောင်း ရင်ဖွင့်လာပါတယ်။ အေးဒါဆို နောက်နေ့မနက် နင်နဲ့ငါ ရုံးခန်းရှေ့မှာ ဆုံကြမယ်နော်၊ အတူတူပြောင်းကြစို့လို့ သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။
အိမ်ရောက်လို့အမေ့ကို ပြောပြတဲ့အခါ အမေက မျက်စိမျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ မပြောင်းဖို့တားပါတယ်။ “ဘွဲ့ရပြီးပြီးချင်း အလုပ်ရမယ့်မေဂျာကို ရရဲ့သားနဲ့ ဘာကြောင့်တခြားဟာကို ယူချင်ရတာလဲ၊ အမေတစ်ယောက်တည်း မုဆိုးမဘဝနဲ့ရုန်းကန်နေရတာ မစဉ်းစားဘူး၊ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတာပဲ ကိုယ်လုပ်တတ်တာ ညည်းလည်းညည်းအဖေအတိုင်းပဲ” လို့ အမေက ဆူပူခဲ့ပါတယ်။ နောက်တနေ့မှာ အမေပြောသလိုအလွန်တရာခေါင်းမာလှတဲ့ကျွန်မဟာ ချိန်းဆိုထားတဲ့အတိုင်း ကျောင်းသားရေးရာဌာနရှေ့မှာ သူငယ်ချင်းကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ သူက ရောက်မလာခဲ့ပါ။ အတန်းချိန်အရမ်းနီးလာတော့ ကျွန်မဖာသာ ဘာသာရပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းစာစောင်ကိုတင်ခဲ့ပြီး အီကိုအတန်းထဲမှာ သွားထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့တွေ့ဖြစ်တဲ့အခါ သူက စိတ်မကောင်းစွာရှင်းပြခဲ့တာက “ဆောရီးပါ ကြည်စင်ရယ် ငါ့အဖေက သဘောမတူဘူး CPA ရအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ် ငါမပြောင်းတော့ဘူးနော်” တဲ့။ သမီးအလိမ္မာသူငယ်ချင်းနဲ့မတူခဲ့တဲ့ ကျွန်မကို ကျွန်မအမေက စိတ်ဆိုးပြီး ၃ရက်လောက် စကားမပြောဘဲနေခဲ့ပါတယ်။ “အမေ့ရဲ့ခံစားချက်ကို နားလည်ပေမယ့် ကျွန်မဘဝကလည်း သေရေးရှင်ရေးတမျှအရေးကြီးနေတဲ့ အကွေ့တကွေ့ဖြစ်ခဲ့လို့ပါ အမေရယ်” လို့ စိတ်ထဲကတောင်းပန်နေခဲ့မိပါတယ်။ “လုံးဝမပြောင်းရဘူး” ဆိုတဲ့ တချက်လွှတ်အမိန့်ပေးစနစ်ကို မသုံးခဲ့ဘဲ ၃ရက်ပဲ စိတ်ဆိုးခဲ့တဲ့အမေ့ကို အခုထိ ကျေးဇူးတင်နေဆဲပါရှင်။
တတိယနှစ်မှစပြီး မဟာဘွဲ့ရသည်အထိ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အရိပ်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ ပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ “Why do we learn this?” နဲ့ “Where do we apply this?” ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကို ပြေလည်အောင် မရှင်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆရာ ဆရာမ အချို့နဲ့တွေ့ဆုံသင်ယူခဲ့ရတာကလွဲလို့ Economics ကို ချစ်မိသွားအောင် သင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆရာ ဆရာမ များကို အမြဲအားကျလေးစားနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကြီးမှာပဲ ဆရာမလုပ်ရင်း ဘဝကို မြှုပ်နှံတော့မယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ မဟာတန်းပထမနှစ်ကို တက်နေစဉ်အတွင်း ကျွန်မဘဝရဲ့နောက်ထပ် အချိုးအကွေ့တစ်ခုနှင့်ထပ်ပြီး ဆုံတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းများအဖြစ် ကျွန်မတို့မိဘများ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ ဒေသမှာ ကျွန်မနှင့် အတူကြီးပြင်းခဲ့သူ (ယခုကျွန်မခင်ပွန်း) က ကျွန်မကို ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ခြင်း နှင့် နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ စီးပွားရေးပါမောက္ခဆရာမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းတို့မှ ကျွန်မဆီကို မဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းအသစ်တွေ ရောက်ရှိလာခဲ့သလို ကျွန်မလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ခရီးကို ပြန်လည်သုံးသပ်စေဖို့ အတွေးသစ်တွေကိုလည်း ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူ့ကို လက်ထပ်လိုက်ရင် သူ့နောက်ကိုလိုက်ရတော့မယ်၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ တနေ့ ဆရာမလုပ်မယ်ဆိုပြီးလျှောက်နေတဲ့ လမ်းကိုရပ်တန့်ပစ်လိုက်ရမယ်။
တဖက်ကလည်း နိုင်ငံခြားသူဆရာမကြီးရဲ့ဟောပြောမှုအပြီး မေးခွန်းမေးရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့စဉ် ပရိတ်သတ်ဆီက ဘာမေးခွန်းမှထွက်မလာခဲ့တဲ့အဖြစ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲပြန်သတိရနေခဲ့မိတယ်။ သူပြောသမျှနားလည်ပေမယ့် မေးခွန်းပြန်မထုတ်တတ်ခဲ့တဲ့ မဟာတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများထဲမှကျွန်မဟာ “ငါ ဆရာမဖြစ်လာတဲ့ တနေ့မှာ ဒီတရုတ်လူမျိုးဆရာမကြီးလို အင်္ဂလိပ်စကားကိုရေလည်ပတ်လည်ပြောနိုင်ပါ့မလား၊ ဒီဆရာမကြီးလို သုတေသနစာတမ်းတွေ ရေးနိုင်ပါ့မလား” ဆိုတဲ့မေးခွန်းများစွာနဲ့ ကိုယ့်ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အထပ်ထပ်အခါခါ သုံးသပ်နေခဲ့မိပါတယ်။ ကျူရှင်ပြမှမိသားစုစားဝတ်နေရေးပြေလည်မှာဖြစ်လို့ ကျူရှင်နောက်ကို ပြေးလိုက်နေရတဲ့ ဆရာမမျိုးမဖြစ်အောင် ကျွန်မ ဘယ်အချိန်ထိတောင့်ခံထားနိုင်မလဲ။ ဘာကိုဆုံးဖြတ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေခိုက်မှာ အနှစ်နှစ်အကာကာလက စောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာမဖြစ်ဖို့ စာမေးပွဲကြီးက ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မချစ်သူကို ကျွန်မအိမ်မက်တွေအကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အခါ ကျွန်မဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးဖြစ်ရမယ်လို့ကတိမပေးနိုင်ပေမယ့် ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့လမ်းကတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး၊ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးကူညီပါ့မယ် လို့ သူကဆိုခဲ့ပါတယ်။ လူတွေ့စာမေးပွဲကိုသွားမဖြေခဲ့တော့ဘဲ မဟာတန်းစာမေးပွဲများအပြီးမှာ သူ့မျက်နှာ တရွာထင်ပြီး ကျွန်မ ဘန်ကောက်ကို လိုက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဖောင်ဖျက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မကို ကျွန်မအမေနှင့်တကွချစ်သူငယ်ချင်းများက စိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ကြပေမယ့် ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းတင်လွန်းလှတဲ့ကလေးသာသာကျွန်မကို ပညာလှလှပေးဖို့ ဘန်ကောက်မြို့ကြီးကတော့ လှောင်ရယ်တဲ့အပြုံးလေးနဲ့ စောင့်ကြိုနေခဲ့ပါတယ်။ ရောက်ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲ ကျွန်မအတွက်ဖိနပ်ဝယ်ဖို့် ကုန်တိုက်တစ်ခုကို သွားခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာကတည်းက ဖိနပ်နံပါတ်ကြီးကြီးနဲ့မှတော်တဲ့ ကျွန်မခြေထောက်ဟာ ထိုင်းအမျိုးသမီးလေးတွေအတွက် စံပြုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်အများစုနဲ့ ဘယ်လိုမှမတော်ခဲ့ပါဘူး။ ဖိနပ်တွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ တစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်စီးခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ အရောင်းစာရေးမလေးမျက်နှာက အနည်းငယ်ညိုလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်သိပ်မရှည်တော့ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ သူက အင်္ဂလိပ်လို တစုံတရာကို ရှင်းပြပါတယ်။ ကျွန်မ ပါးစပ်မှ “ဒီဖိနပ်က သေးနေတယ်” လို့ မြန်မာလို လွှတ်ကနဲထွက်သွားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓေါ …. ကျွန်မ အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုပြော ရမယ်ဆိုတာသိနေရဲ့သားနဲ့ ဘာကြောင့် မြန်မာလိုပြောမိသွားတာလဲ။ အရောင်းစာရေးမလေးက ကျွန်မကို အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီး ဒါအကုန်ပဲ လို့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဝါကျမမှန်တဲ့ ထိုင်းသံဝဲဝဲ သူ့အင်္ဂလိပ်စာကို စိတ်ထဲက ပြန်ပြင်ပေးနေမိခဲ့တဲ့ ကျွန်မပါးစပ်က “small” ဆိုတဲ့ အလွန်တရာ လွယ်ကူလှတဲ့စကားလေး တစ်လုံးတောင် ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။
သွားပြီ။ “culture shock” လို့ခေါ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာရတဲ့ ပြဿနာနဲ့ ကျွန်မ စတွေ့ပါပြီ။ အသက် ၂၈နှစ်ကျော်မှ နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား စပြောဖူးခဲ့တဲ့ကျွန်မ စာမေးပွဲကျပါပြီ။ ထို့နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကျွန်မခင်ပွန်းရုံးက ညစာစားပွဲတွေမှာ ဘာစကားမှထွက်မလာဘဲပြုံးပြုံးလေးနဲ့ထိုင်နေခဲ့တဲ့ကျွန်မကို သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ကြိတ်ရယ်ကြပါတယ်။ “ထွန်းထွန်းမိန်းမ ပြုံးတာ အလွန်တော်တယ်” လို့ မနေနိုင်တဲ့ တစ်ယောက်က ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးလှောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။ “မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေတတ်ခဲ့တတ်ခဲ့ နိုင်ငံခြား အတွေ့အကြုံ (exposure) ရှိဖို့လိုတယ်” ဆိုတဲ့ ကျွန်မလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ဆရာမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ စကားကို ပြန်ကြားယောင် နေခဲ့မိပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ အူကြောင်ကြားဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ကျွန်မခင်ပွန်းသည်က အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းတစ်ခုမှာ လိုက်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရေးဖြေဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ ဖြေအပြီးမှာ အဆင့်၁၅ဆင့်ရှိတဲ့အနက် အဆင့် ၁၁ ကနေ စတက်ရမယ်လို့အဖြေထွက်ပါတယ်။ ရှက်လည်းရှက်ပါတယ်၊ မရှက်လည်းမရှက်ပါဘူး ဆိုသလိုပါပဲ ကျွန်မရဲ့အတန်းဖော်တွေက ထိုင်း အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်နဲ့ဒုတိယနှစ်က ကလေးတွေပါ။ ကျွန်မနဲ့ရွယ်တူက ၃-၄ယောက်ထဲပါ။ ပညာရှာပမာသူဖုန်းစား ဆိုတဲ့ စာဆိုကို စိတ်ထဲမှာထားပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်မှုကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆင့်၁၅အပြီးမှာ ကျွန်မလူရှေ့မှာ စကားပြောရဲလာခဲ့ပါတယ်။ “ချစ်လေးဖာသာ ဘာတွေဘယ်လောက်တတ်တတ် ကိုယ်သိတာတွေ သူများကိုမပြောပြနိုင်ရင် အ, အနဲ့ အတူတူပဲ၊ စကားပြောတဲ့အခါ လူတွေကို အထင်လည်းအရမ်းမကြီးနဲ့ အထင်လည်းအရမ်းမသေးနဲ့၊ အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရင် ဘာစကားမှထွက်မလာတော့ဘူုး” လို့ ကျွန်မကို သူက သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ IELTS စာမေးပွဲကို ဖြေအပြီးမှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ညံ့တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ Speaking အမှတ်က အခြားReading, Writing, နဲ့ Listening အမှတ်တွေနဲ့ အတူတူပဲရခဲ့ပါတယ်။ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းအတွက် တံခါးပိတ်ထားခဲ့တဲ့ကျွန်မတို့နိုင်ငံကြီးကိုပဲအပြစ်တင်ရမလား၊ လူရှေ့ထွက်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး မရနိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဘဝကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား ကျွန်မ မသိပါ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း Assumption University (Abac)မှာ ကျွန်မခင်ပွန်းသည် ဆရာဖြစ်လာခဲ့ပြီးမကြာခင် မြန်မာဆရာမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်မစကားပြောဖြစ်တဲ့အခါ ဒီတက္ကသိုလ်မှာပဲ ဆရာမအလုပ်လျှောက်ကြည့်ဖို့ သူကအကြံပေးလာခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့စာရွက် စာတမ်းတွေကို ဆရာမကြီးမိသားစု အကူအညီနဲ့ သက်ဆိုင်ရာကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ပြသင်ကြားမှုကို လေ့ကျင့်ထားပါဆိုတဲ့ ဆရာမကြီး အကြံပေးချက်အရ PowerPoint လေးပြင်လိုက် လေ့ကျင့်လိုက်နဲ့ စောင့်နေခဲ့တာ ၁လနီးပါးအကြာမှာ အားနာတဲ့မျက်နှာနဲ့ဆရာမကြီးဟာ ကျွန်မတို့အိမ်ကလေးကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကရခဲ့တဲ့ဘွဲ့တွေနဲ့မို့လို့ ဒီကျောင်းကမစဉ်းစားပါလို့ သက်ဆိုင်ရာက အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ တခြားအလုပ်တွေလျှောက်ကြည့်ပါအုံးလို့ အားပေးစကားပြောပြီး ဆရာမကြီး ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဝမ်းနည်းမှုက ကျွန်မကိုယ်တိုင်အတွက်ပါ။ ကျွန်မ ဒီဘွဲ့၂ခုကို ပြီးစလွယ်ရလာခဲ့တာ မဟုတ်ရပါဘူး၊ တကယ့်ကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ အချိန်အကြာကြီးမြှုပ်နှံပြီးမှ ရခဲ့တာပါ။ ဒုတိယဝမ်းနည်းမှုက ကျွန်မချစ်တဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကြီးနဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေအတွက်ပါ။ တတိယဝမ်းနည်းမှုကတော့ ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ ပြည်သူပြည်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းဘွဲ့ရတဲ့ မြန်မာပြည်ကပညာတတ်တွေကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်မပြုပါတဲ့၊ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းအရေအတွက်က သုည ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကို ဥခွံထဲက ဖောက်ထွက်ခဲ့ရတဲ့ ကြက်ကလေးငှက်ကလေးတွေရဲ့ အဖြစ်နဲ့ နှိုင်းစာမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးများဟာ အားအင်ချိနဲ့တဲ့ ကြက်ကလေးငှက်ကလေးများနဲ့တူပြီး၊ ဥခွံတွေကတော့ အခြားလူမျိုးများဖောက်ထွက်ခဲ့ရတဲ့ အခွံများထက် အဆပေါင်းများစွာမာကျောထူထပ်နေလေမလားလို့ ကျွန်မတွေးမိပါတယ်။
၂၀၀၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ၁၀လပဲရှိသေးတဲ့သမီးလေးနှင်းနှင်းကို ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ထားခဲ့ပြီး ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးများမညံ့ကြဘူးဆိုတာကို သက်သေပြဖို့အတွက် (အလွန်တရာလေကြီးသူလို့ ကျွန်မကို ထင်နိုင်ပါတယ်) ဂျပန်နိုင်ငံ IUJ (International University of Japan) ကို ကျွန်မထွက်ခွါလာခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးဖြေရတဲ့ Midterm စာမေးပွဲက မေးခွန်းအလွန်ခက်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဂျပန်ပါမောက္ခ ဆရာ မီရာမိုတိုရဲ့ Microeconomics စာမေးပွဲပါ။ စာမေးပွဲအစ မိနစ် ၂၀ အတွင်း ကျွန်မ ဘာဖြေရမှန်း ကို မသိခဲ့ပါ။ မလှမ်းမကမ်းက ဗီယက်နမ်မလေးက ဂဏန်းပေါင်းစက်ကို တဒေါက်ဒေါက်နှိပ်ရင်း အားတက်သရောဖြေနေချိန်မှာ ကျွန်မလက်မှာ ချွေးစေးတွေ ပြန်နေခဲ့ပါတယ်။
Mathematics for Economics အတန်းထဲမှာ အဆင့်မြင့်သင်္ချာနဲ့ ဘောဂဗေဒ ဘယ်လိုပေါင်းထုပ်ကြသလဲဆိုတဲ့ ကျွန်မ နားမလည်နိုင်ခဲ့တဲ့ why နဲ့ application ကိစ္စတွေကို ဆရာကရှင်းပြခဲ့စဉ်မှာ ကျွန်မက အသဲအသန်လိုက်မှတ်နေပေမယ့် ဘေးခုံမှာထိုင်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်မထက်၈နှစ်လောက်ငယ်တဲ့ အိန္ဒိယမှကျောင်းသားတစ်ယောက်က စာအုပ်ထဲမှာ ဘာမှလိုက်မရေးဘဲ ဆရာကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ တွက်ပြနေတဲ့ပုစ္ဆာကို ပါးစပ်နဲ့ လိုက်တွက်ပြီးအဖြေထွက်နှင့်နေပါပြီ။ Midterm သင်္ချာစာမေးပွဲမှာ ၁၀၀ ဖိုးထဲက ၈၀ ရအောင် ကျွန်မအကြိတ်အနယ်ဖြေခဲ့ရပေမယ့် စာမေးပွဲခန်းကအထွက်မှာ ဒီစာမေးပွဲကအလွန်ပျင်းစရာကောင်းတယ် ဒီ့ထက်စိန်ခေါ်မှုတွေပါတဲ့မေးခွန်းမျိုးထုတ်ပါလို့ ပါမောက္ခကို သွားပြောမယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်ပြည့်ရခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်မလေးရဲ့စကားကို တဆင့်ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ Economics ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကို စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့အမျှနားလည်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မနားလည်တွေ့ရှိထားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အဆင့်မြင့်သင်္ချာကိုသုံးပြီးသက်သေပြုရှင်းပြနိုင်ဖို့က ကျွန်မအတွက် အခက်ခဲဆုံးအဆင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မစိတ်တွေကို ဆွဲကိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တစ်ခုရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျောင်းသားများအပေါ် စေတနာလည်းမထား အလုပ်မှာလည်း ဘာအားစိုက်ထုတ်မှုမှမရှိခဲ့တဲ့ ဆရာမတချို့ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် နိုင်ငံခြားကျောင်းလျှောက်လေတိုင်း မလှမပဖြစ်နေခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်မှအမှတ်စာရင်းကိုရရှိထားသူ၊ ပြောရေးဆိုခွင့်ဘာမှမရှိခဲ့သူ ကျွန်မဟာ သင်ကြားသူဆရာနဲ့ဘာသာရပ်အပေါ်အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခြင်း (Instructor and Course Evaluation) စနစ်ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင့်သုံးခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ IUJမှာ “သင့်ဆရာက သင်တို့အားမေးခွန်းမေးရန် အခွင့်အရေးပေးပါသလား၊ သူဟာ ဒီဘာသာရပ်ကိုသင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ဗဟုသုတများနဲ့ ပြည့်စုံသူဖြစ်တယ်လို့ သင် သဘောတူပါသလား၊ သူ့အား သင့်အနေနှင့် ဘယ်လိုအကြံများပေးလိုပါသလဲ” စတဲ့ မေးခွန်းများကို ဖြေခဲ့ရစဉ် ရှင်းပြခြင်းငှာမတတ်သာတဲ့ ခံစားချက်များနဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ လှိုင်းထနေခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးterm ရဲ့ final စာမေးပွဲများအပြီးမှာ ကျွန်မတို့ပထမနှစ်တွေကို ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားများမှ ကြိုဆိုပွဲလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မီးပွင့်မတတ်သုံးခဲ့ရတဲ့ကျွန်မခေါင်းကိုထူဖို့ ဘာအင်အားမှ မကျန်တော့တဲ့အတွက် အခန်းမီးကို ပိတ်ပြီး အိပ်ရာထဲမှာလှဲလှောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ နောက်တနေ့မနက်မှာ သူငယ်ချင်းများက နှင်းထဲမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ လာခေါ်တဲ့အတွက်လိုက်သွားခဲ့ပြီး အခန်းပြန်အရောက်၊ ကွန်ပြူတာထဲမှ ကိုယ်ပုံကို ကိုယ်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါ ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၎လ IUJ ရောက်ခါစက ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ပုံထဲကနဲ့မတူ အသက်၁၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ လူစိမ်းတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပါပဲ။
စာကြည့်တာများလာတိုင်း ခဏရပ်ပြီး ကျွန်မအခန်းစာကြည့်စားပွဲကနေ နှင်းတွေကျထားတဲ့ တောင်တန်းကြီးကို တခါတရံ ကျွန်မငေးမောမိတတ်ပါတယ်။ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ ကားရပ်နားဝန်းဆီကို နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားများ ကားလာယူပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ သွားကြတာကို ရာသီဥတုကောင်းတဲ့နေ့တိုင်းလိုလို ကျွန်မမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ စာတွေပြီးသွားကြချိန်မှာ ကျွန်မ ဘာကြောင့် မပြီးသေးတာလဲ၊ ကျွန်မ စာကြည့်ချိန်ရဲ့ တဝက်လောက်ပဲ ရှိမယ့် သူတို့စာကြည့်ချိန်တွေနဲ့ ကျွန်မ လိုက်လို့မမှီအောင် သူတို့ ဘယ်လိုများစာတွေကြည့်လိုက်ကြသလဲ။ ကျွန်မရှေ့မှာ အင်ဒိုနီးရှားက စာအတော်ဆုံး ကျောင်းသား၂ယောက်၊ အိန္ဒိယက တစ်ယောက်၊ ဗီယက်နမ်က တစ်ယောက်၊ ကမ္ဘောဒီးယားက တစ်ယောက်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ၂ယောက်၊ နဲ့ နီပေါက တစ်ယောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ် (နိုင်ငံအားလုံးနီးနီး ဆိုပါတော့)။
သူတို့ကိုလိုက်လို့မမှီရခြင်း အဓိကအကြောင်းအရင်းက အတွေ့အကြုံ (Exposure)နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု (Skills) တွေ ကွာခြားခြင်းကြောင့်ဆိုတာကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်မနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။ ညံ့ဖျင်းတဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာ ကျွန်မတို့ဟာ skills တွေ အလွန်နည်းပါးခဲ့ပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်စာ သင်္ချာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ မေးခွန်းထုတ်တတ်မှု၊ ဆွေးနွေးငြင်းခုံတတ်မှု၊ ဆက်စပ်တွေးခေါ်နိုင်မှု၊ အိုး …….. အများကြီးမှ အများကြီး ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးကို နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုတာကို ကျွန်မ လက်မခံချင်ဘဲလက်ခံရတော့မယ်။ နောက်ခံပညာရေးစနစ်သာ တူခဲ့ရင် ကျွန်မ သူတို့နဲ့ အပြိုင်ရင်ဘောင်မတန်းနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲနော်။ အခုတော့ ယုန်နဲ့လိပ် အပြေးပြိုင်သလို ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မကို နိုင်ငံတကာပညာရေးစနစ်နဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရစေခဲ့တဲ့ ကျွန်မကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သူ၊ အကူအညီပေးခဲ့သူ၊ နှင့် လျစ်လျူရှု့ခဲ့သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂျပန်မှ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမဟာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့အပြီး ဘန်ကောက်ပြန်အရောက်မှာ Abac မှာပဲ ဆရာမအလုပ်လျှောက်လွှာကို တင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့တဲ့လူတွေဆီကို ကျွန်မ ပြန်မသွားချင်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။ မျက်နှာအမူအရာနှင့်တမျိုး စကားများနှင့်တဖုံ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် အထင်သေးကြောင်း ပြသပြောဆိုတတ်တဲ့ လူများက ဒီလို International ပတ်ဝန်းကျင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးတစ်ခုမှာလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ သို့ပေမယ့် ဆရာတော်ဦးဇောတိက ရေးတဲ့ “ဘဝဆိုတဲ့ကျောင်း” စာအုပ်သေးသေးလေးထဲက မမေ့နိုင်စရာ လိုက်နာစရာ ဘဝအတွက်ခံယူချက်ကလေးတစ်ခုကို သတိရနေမိခဲ့တယ်။ “ဘဝဆိုတဲ့ကျောင်းမှာ သင်ခန်းစာတစ်ခုကို မကျေညက်ခဲ့ရင် နောက်ထပ် အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုပဲထပ်ခါတလဲလဲပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်၊ အဲ့ဒီနေရာကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်ပြီးခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ စာမေးပွဲထပ်ဖြေစရာမလိုတော့ဘူး” တဲ့လေ။ ကျွန်မတို့မညံ့ကြောင်း သူတို့ကိုသက်သေပြရအုံးမယ် (ကြီးကျယ်ပြန်ပြီ)။ Exposure နဲ့ Skills အသင့်အတင့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် တိန်တိန်မြည်အရည်အချင်းတွေနဲ့ မဟုတ်သေးတဲ့ကျွန်မအတွက် ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ဆရာမအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့က ကျွန်မဘဝမှာ ဘယ်သူကမှမတိုက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတစ်ခုပေါ့။
ပထမဦးဆုံးစာသင်နှစ်ဟာ ကျွန်မဘဝရဲ့ အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေထဲက တစ်ခုလို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေရှေ့ရပ်ပြီး ၁နာရီခွဲစာ Lecture ကို အမှားမယွင်းမရှိ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ဖို့က ကျွန်မအတွက် အကြီးမားဆုံး အတားအဆီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတိုင်းပြည်များမှလာသော ကျောင်းသားများရှေ့မှာ ကျွန်မလျှာကလည်း ခဏခဏ ခလုတ်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဖာသာ တိုးတိုးစကားပြောပြီးရယ်တာတွေ့ရင် ကျွန်မကို ရယ်တာများလားလို့ တွေးပြီး အိပ်မပျော်ဖြစ်ပြန်ပါလေရော။ စာသင်ချိန်များကို လေ့ကျင့်ရေးကွင်းများအဖြစ်မှတ်ယူပြီး (သင့်မသင့် ကျွန်မ မသိပါ) နောက်အတန်းမှာ ငါ ဒီထက်ကောင်းအောင် ပြောနိုင်လာမယ်၊ နောက် စာသင်နှစ်ဝက်မှာ၊ နောက်နှစ်မှာ ငါ ဒီထက် အများကြီးတိုးတက်လာမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားတင်းရင်းဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မက လူရှေ့ထွက်စကားပြောခြင်း အရည်အချင်း (Public Speaking Skill) ကို သွေးနေစဉ်မှာ ကျွန်မနဲ့အတူ အလုပ်ဝင်တဲ့ ကျွန်မထက် အသက်၁၀နှစ် ငယ်တဲ့ထိုင်းဆရာမလေးက မျက်နှာလေးချီပြီး ကျောင်းသားတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ skill ကို စတင်လေ့ကျင့်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မ ကျောင်းသားတွေရှေ့မှာ စကားပြော အိုကေ လာတဲ့အချိန် ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ လုံးချာလည်လိုက်နေစဉ်မှာ သူက ပါရဂူသင်တန်းတက်ရန် လိုအပ်တဲ့စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုပြီးဖြစ်နှင့်ပါပြီ။ ပုံပျက်စပြုလာတဲ့ကျွန်မကိုယ်ခန္ဓာကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အလွန်ကျော့ရှင်းလှတဲ့ သူက လမ်းညွှန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ အတန်းထဲက top နေရာတွေကို ယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် အားကစား၊ဂီတ စတဲ့ Extra Curriculum Activities တွေကိုပါလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ IUJ က အတန်းဖော်တွေကို အားကျခဲ့ရတဲ့ကျွန်မ အလုပ်လုပ်ရင်း ဘဝအခြေအနေကိုပါ ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းထားနိုင်တဲ့ ထိုင်းဆရာမ ငယ်ငယ်လေးကို ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ အလေးပြုခဲ့ရပါတယ်။
ထိုင်းလူမျိုးတွေဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေလောက် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး (Intelligence) မမြင့်မားဘူးလို့ မြန်မာအများစုက ပြောကြပါတယ်။ ကျွန်မ အနည်းငယ်မျှသာ လက်ခံလိုပါတယ်။ ကျွန်မ လေ့လာဖတ်ရှု့မှုအရ Intelligence ဆိုတာ မွေးရာပါက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲပါလာတာလို့ သိပံ္ပပညာရှင်အများစုက ဆိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လူတစ်ဦးမွေးဖွားကြီးပြင်းရာ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြုပြင်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့ မွေးရာပါ Intelligence အဆင့် တူညီတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား (အာရှနိုင်ငံသားပဲဆိုကြပါစို့) တစ်ယောက်နဲ့ စာပြိုင်ရင် ကျွန်မရှုံးပါတယ်၊ ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက ကျွန်မထက် Exposure နဲ့ Skills တွေ အများကြီးသာနေလို့ပါ။ ကျွန်မလက်ရှိသင်ကြားနေတဲ့ ဘွဲ့ကြိုအီကိုတန်းရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ကြားမှုစနစ်နှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများက ကျွန်မရခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က မဟာဘွဲ့ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ကြားမှုစနစ်နှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများထက် သာတယ်လို့(ကျွန်မ မျက်စိကို မှိတ်ပြီး) ပြောပါရစေ။ ဒီလို ကျွန်မတို့နိုင်ငံက “တော်” ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ အခြားအာရှနိုင်ငံများမှ “သင့်” ဆိုသော လူတစ်ယောက်နဲ့ သူတင်ကိုယ်တင်ဖြစ်ဖို့ လျှာတစ်တောင်လောက်ထွက်အောင် ပြေးလိုက်နေရပြီး ကျွန်မတို့ နိုင်ငံက “သင့်” ဆိုသောလူတွေဟာ သူများနိုင်ငံတွေမှာ “ညံ့” ဆိုသောလူတွေလုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကို အောက်ကျခံပြီး သွားလုပ်နေရတာတွေကို သုံးသပ်မိမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ကို တွေးကြည့်နိုင်ကြပါပြီ။
တိုင်းပြည်များ ဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲဆိုတဲ့ International Development ဘာသာရပ်နဲ့ မဟာဘွဲ့ရထားတဲ့ကျွန်မ၊ တိုင်းပြည်များ၏ရေရှည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု (Long-Run Economic Growth) တနည်းအားဖြင့် ရေရှည်လူမှုဘဝကောင်းမွန်မှု ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ကျောင်းသားတွေကိုရှင်းပြတိုင်း ပညာရေးဟာ Long-Run Economic Growth အတွက် အရေးအပါဆုံး နံပါတ်တစ်လို့ သူတို့ခေါင်းထဲကို စွဲနေအောင် ဥပမာလေးတွေပေးပြီး ရှင်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးကြီး နလန်မထူနိုင်လောက်အောင် နိမ့်ကျပြီး စာသင်ခွင့်မရတဲ့ကလေးတွေအကြောင်းကြားရတိုင်း ရင်ထဲမှာဆို့နင့်နေမိတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါ။ မြန်မာလူကြီးတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ် “ညည်းတို့တတွေ ဒီတိုင်းပြည်မှာလူဖြစ်လာတာ ညည်းတို့ကိုက ကံမကောင်းလို့ပေါ့အေ၊ ညည်းတို့ ကုသိုလ်တွေ အရမ်းကောင်းကြရင် ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ လူဖြစ်ကြမှာပေါ့” တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်မတို့ အတိတ်ကံတွေ မကောင်းခဲ့ကြလို့ ဒီတိုင်းပြည်မှာလူလာဖြစ်ကြတယ်၊ အခက်အခဲတွေ ဖိနှိပ်မှုတွေ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေအောက်ကနေ ပင်ပင်ပန်းပန်းထိုးထွက်ကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့မျိုးဆက် ကလေးငယ်လေးတွေကို “ကဲ ကံမကောင်းလို့ ဒီနိုင်ငံမှာ လူဖြစ်ကြတယ်၊ သည်းခံပြီးနေကြလေရော့” လို့ ကျွန်မတို့ ပြောသင့်ပါသလား၊ ပြောရက်ပါသလား။
ကျွန်မ မပြောရက်ပါ။ ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကို စောင့်မျှော်ရင်းမှပင် ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကနေ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်အင်အားလေးတွေနဲ့ ဒီပညာရေးစနစ်ကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်ကြပါစို့လား။ နှမ်းစေ့ကလေးတွေအားလုံးပေါင်းမိသွားတဲ့တချိန်မှာ ကျွန်မ တို့နိုင်ငံကြီးကို အများနည်းတူ အရှိန်ပြည့်မောင်းနှင်နိုင်ဖို့ အဓိကစွမ်းအင်ဖြစ်တဲ့ ကြည်စင်ရှင်းသန့်လှတဲ့ဆီကောင်းကောင်းလေးတွေ အမြောက်အမြားထွက်ရှိလာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်လျှက် …………………..
One Response to ကြည်စင်သန့် – အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေး
catwoman on June 26, 2014 at 2:55 am
i think you re very honest about your experiences. most people wont admit that they have difficulities . they will just write that burmese people are very smart blah blah blah . yes we do need to teach abstract thinking and make the learning proces more fun. I hated history because all we have to do is memorize things and dates. they never teach us so it s educational .
I stayed in med school in burma forafew months only and left. I started here atacommunity college here in the US and the education system is way more better. but college these days in US is very expensive now